FIKRIFA ANTANIMALANDY : Niavaka ny fankalazana ny alakamisy masina
" Fanatitra ankasitrahana". Io no lohahevitra nosalorana ny fankalazana ny andron’ny paka ho amin’ity taona ity ho an’ny fiangonana Kristy fandresena eny Antanimalandy Ampaharingidro. 31 mars 2018
Hatramin’ny alahady 25 marsa lasa teo no nisantarana ny herinandro masina, izay fanaon’ireo mpino kristianina rehetra maneran-tany koa tsy diso anjara tamin’izany koa ity fiangonana fifohazana iray ity. Ny salamo faha 50 : 1-23, milaza " fa angony ety amiko ny oloko masina izay manao fanekena amiko amin’ny fanatitra" no novoaboasan’i dokotera Randrianarivony Jeannot, nitondra ny tenin’Andriamanitra tamin’io fotoana fanokafana io.
Raha ny filohan’ny fiangonana Rasolofoson Daniel, kosa no nitory ny andalan-tsoratra masina voarakitra tao amin’ny I korintianina 14-33, tamin’iny alakamisy masina teo iny. Ny nampiavaka ny fankalazana dia ny nanantanterahana ny baikon’ ny Tompo dia ny fifanasan-tongotra teo amin’ny samy mpino, ary nofaranana tamin’ny fandraisana ny fanasan’ ny Tompo. Ny alahady 01 avrily izao no fankalazana ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty, ka i Randrianavalona Landisoa na i Neny no hitarika ny fotoam-pivavahana manomboka aminy 08 ora sy sasany maraina, ary ny pastora Rakotomanga Heriniaina Harinosy, mpitandrina ao an-toerana no hiantsoroka ny sorona masina rehetra mandritry ny paka ho an’ity fiangonana Fikrifa etsy Antanimalandy ity.
Mandritr’izay dia hisy ny fanoloran-jaza ho an’ireo ray aman-dreny resy lahatra ny amin’izany sy ny fandraisana ny fanasan’i Tompo ihany koa. Hofaranana amin’ny fiderana an-kira, tantara an-tsehatra, ary dihy mirindra iarahana amin’ny tarika ara-pilazan-tsara "Roimemy", ny fankalazana ny fetin’ny paka amin’ity taona ity ho an’ity fiangonana iray ity.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (428) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (160) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (72) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (70) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (64) 2 mars 2021 Vehivavy iray maty tao Nosy Be, mitontaly 83 ireo marary CORONAVIRUS ATY DIANA (50) 2 mars 2021